टोकियो ओलम्पिकः अमेरिकाको कमजोर शुरुआत, ब्रजिलले चीनलाई हरायो
महिला फुटबलको पहिलो खेलमै उपाधि दाबेदार अमेरिका पराजित भएको छ । अमेरिका स्वीडेनसँग ३–० गोल अन्तरले पराजित भयो ।
फेडेररले टोकियो ओलम्पिक नखेल्ने
३० असार, काठमाडौं । स्वीस स्टार रोजर फेडेररले यही जुलाई २३ देखि जापानमा सुरु हुने टोकियो ओलम्पिक नखेल्ने भएका छन् । फेडेररले घुँडामा चोट रहेकोले ओलम्पिकबाट नाम फिर्ता लिएका हुन् । फेडेररले ग्रास कवर्टमा खेल्दा आफूलाई घुँडामा समस्या भएकोले बफूले ओलम्पिकबाट नाम फिर्ता लिने विषयलाई स्वीकार गरेको जनाएका छन् । सन् २०१२ को लण्डन ओलम्पिक […]
एजेन्सी। बीस पटकको ग्राण्डस्लाम उपाधि विजेता रोजर फेडेररले र बेलयातकी नम्बर एक जोहाना कोन्टाले टोकियो ओलम्पिक नखेल्ने भएका छन्। ३९ वर्षीय फेडेररले कुर्कुच्चाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएका कारण टोकियो ओलम्पिक नखेल्ने घोषणा गरेका हुन्। फेडेररले बेइजिङ ओलम्पिकमा दुई स्वर्ण पदक जितेका थिए भने लन्डन ओलम्पिकमा रजत पदक जितेका थिए। ३० वर्षीया कोन्टा कोभिड–१९ संक्रमित भएका कारण नखेल्ने भएकी हुन्।
कोरोना महामारीका कारण एक वर्ष ढिला गरी आयोजना हुन लागेको टोकियो ओलम्पिक आगामी जुलाई २३ देखि सुरु हुँदै छ। टोकियो ओलम्पिक खेल्ने पाँच खेलाडीमध्ये तीन खेलाडीलाई बुधबारदेखि १५ दिनको बन्द प्रशिक्षण राखिएको छ। यसपटक सुटिङ, पौडी, एथ्लेटिक्स र जुडोका नेपाली खेल...
सेरेना विलियम्सले टोकियो ओलम्पिक नखेल्ने
एजेन्सी। पूर्वविश्व नम्बर एक सेरेना विलियम्सले टोकियो ओलम्पिक नखेल्ने भएकी छन्। सोमबारबाट सुरू हुने विम्बल्डन टेनिसअघि सरेनाले टोकियो ओलम्पिक नखेल्ने बताएकी हुन्। तर उनले कारण भने खुलाएकी छैनन्। अमेरिकाकी ३९ वर्षीया सेरेनाले ओलम्पिकमा चार पटक स्वर्ण पटक जितिसकेकी छन्। उनले लण्डन ओलम्पिकमा एकल र युगल, सिड्नी आलम्पिकमा युगल र बेइजिङ ओलम्पिकमा युगलतर्फ स्वर्ण पदक जितेकी थिइन्।
Dekhapadhi 26 दिन पहिले
चार पटकका स्वर्ण पदक विजेता फराहले टोकियो ओलम्पिक गुमाउने
एजेन्सी।चार पटकको ओलम्पिक स्वर्ण पदक विजेता मो.फराहले टोकियो ओलम्पिक खेल्न नपाउने भएका छन्। म्यानचेस्टरमा सम्पन्न १० हजार मिटर दौडको छनोटमा फराह १९ सेकेण्डले पछाडि परेका हुन्। २७ मिनेट २८ सेकेण्डमा दुरी पार गर्नु पर्नेमा फराहले २७ मिनेट ४७.०४ सेकेण्डमा दुरी पार गरेका थिए। फराहले लन्डन ओलम्पिक र रियो ओलम्पिकमा १० र पाँच हजार मिटर दौडमा स्वर्ण पदक जितेका थिए।
टोकियो/ टोकियो ओलम्पिक आयोजक समितिले टोकियो ओलम्पिक खेलमा रंगशालामा १० हजारसम्म दर्शकलाई उपस्थित हुन दिने निर्णय गरेको छ । रंगशालामा के कति दर्शकलाई उपस्थित हुन दिने भन्नेमा अन्यौल भइरहेको अवस्थामा खेल आयोजनाका मुख्य पाँच पक्षहरु अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी, आइपिसी, टोकियो २०२० आयोजक समिति, टोकियो महानगर र जापान सरकारबीच यस्तो सहमति भएको हो । आयोजक समितिका... The post टोकियो ओलम्पिक रंगशालामा १० हजारसम्म दर्शक उपस्थित हुन सक्ने appeared first on Purbeli News.
टोकियो ओलम्पिक हेर्न विदेशी दर्शक रंगशाला जान नपाउने
एजेन्सी। टोकियो ओलम्पिक आयोजक समितिले टोकियो ओलम्पिक खेल हेर्न विदेशी दर्शकलाई रंगशालामा प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण र खेल सुचारु गर्न यस्तो निर्णय गरिएको हो। यो निर्णयसँगै यस पटकको ओलम्पिकमा जापानबाहेक अन्य देशका दर्शकले रंगशालामा गएर प्रयक्ष खेल हेर्न पाउने छैनन्। समितिले रंगशालामा १० हजारसम्म दर्शकलाई उपस्थित हुन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
टोकियो ओलम्पिक ५० दिनपछि हुने निश्चित
एजेन्सी, २० जेठ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण टोकिया ओलम्पिक यो वर्ष पनि हुनेमा आशंका गरिएको छ । तर, ओलम्पिक आयोजक कमिटीले अबको ५० दिनपछि अर्थात् २३ जुलाईमा सुरु हुनेमा ढुक्क हु भनेको छ । टोकियो २०२० ओलम्पिककी प्रमुख सिको हासिमोटोले सतप्रतिशत ओलम्पिक हुनेमा निश्चिन्त हुन भनेकी छिन् । गतवर्ष हुनुपर्ने ओलम्पिक यो वर्षका लागि […]
टोकियो ओलम्पिक अब रद्द नहुने
एजेन्सी। टोकियो ओलम्पिक आयोजना समितिकी प्रमुख सेइको होसिमोतोले तीन महिनापछि खेल सुरु हुने बताएकी छन्। कोरोनाका कारण एकपटक स्थगित गरिएको ओलम्पिक अब रद्द नहुने उनले आश्वासन दिएकी हुन्। एक पत्रकार सम्मेलनमा होसिमोतोले भनिन्, “थुप्रै चिन्ता छन्, तर टोकियो २०२० आयोजन समिति खेल रद्द गर्नेबारे सोच्न सक्दैन।”